उपकरण ठेगाना मान्यता - प्रमाणपत्र संग काम लागि XMailer 3.0
परीक्षक ई-मेल ठेगाना लागि अस्तित्व
हामी तपाईं सिफारिस गर्न यो उपकरण प्रयोग गर्न मान्य आफ्नो प्रापकलाई ' ठेगाना अघि प्रत्येक पत्राचार सूची र बाहिर weed Martie पत्राचार ठेगाना स्रोतहरू बचत.
सम्भव मार्फत प्रमाणिकरण
वाक्य संरचना जाँच गर्नुहोस्
अनुमति हिज्जे जाँच गर्न, को इमेल ठेगाना. जाँच गर्दैन DNS सर्भर र मेल सर्भर को प्राप्तकर्ता.
चेक मा रेकर्ड को लागि DNS सर्भर को अस्तित्व लागि रेकर्ड प्राप्तकर्ता को डोमेन हो । हामी यो प्रयोग गर्न तपाईं सिफारिस प्रमाणिकरण विधि सँगै संग, एक चेक लागि विन्यास छ ।
चेक लग इन
मा चेक मेल सर्भर को प्राप्तकर्ता छ कि सबैभन्दा सही र विश्वसनीय परीक्षण को अस्तित्व लागि pochtovo बक्स छ, तर Soriano संग केही शब्दहरू सजिलै र कठिनाइहरू ।
उदाहरणका लागि: तपाईं हुनुपर्छ सेतो आईपी रूपमा, सबैभन्दा साधारण पोस्ट सेवा mail.ru आवश्यकता गर्न यो जडान गर्न, मात्र सेतो आईपी. समयमा XMailer उत्पादन सम्बोधन गर्न मेल सर्भर गर्न एक प्रयास मा सिक्न अस्तित्व विशिष्ट ई-मेल ठेगाना, then you can be banned लागि बारम्बार उपचार ।
म चाहन्छु कि नोट भने जाँच गर्दा लागि लगइन तपाईं प्राप्त जवाफ बारेमा अस्तित्व को प्राप्तकर्ता ठेगाना, त्यसपछि यो निश्चित काम त्यहाँ छ । हामी सिफारिस गर्न यो विधि प्रयोग गर्न को सूची जाँच सम्म 1000 ठेगाना मा दिन ।